Iindaba - Itswele yesivuno sexesha lonyaka liyaphuma!
Elinye lawona macandelo avuzayo omsebenzi wam njengomphulaphuli olungileyo zizinto ezincinci enabelana ngazo nam, nokuba zizitya ezenziwe ekhaya, iindaba malunga namazwe akho, ifoto yeemveliso zezolimo ozikhulisayo kumazwe, okanye ezona zilungileyo sonke, ukubona izityalo esizivunileyo kwiminyaka edlulileyo ngesiquphe zivela kwimbewu ngaphakathi komhlaba ukuya kolula amakhaka abo. [Yongeza i-pic yezityalo apha phakathi] Umphefumlo omangalisayo wabelane ngefoto ngasentla nam kwimpelaveki ephelileyo. Ishwankathela yonke into endizamile ukuyithetha apha kule minyaka ilishumi idlulileyo. Ndinokufumana umoya omde ngokwaneleyo kwesi sithuba ngamanye amaxesha. Andinanto ndingayongeza kule nothi intle.
Amatswele ethu alinywa ngexesha lekwindla qho ngonyaka, ngaphandle kwamatswele amancinci amile kuphela akhula kweyona ndawo ibanda emantla. Njengoko sonke sisazi, ixesha letswele lisoloko libonakala lifutshane kakhulu. Ubunyani bayo kukuba siphila kwindawo eshushu, emanzi nefumileyo. Kushushu, kumanzi, kwaye kufumile ziimeko ezifanelekileyo zokukhula kwezifo zezityalo. Senza konke okusemandleni ethu ukuqinisekisa ukuba siqala ngezona zisempilweni izityalo, kwaye sinika umhlaba yonke into enokufunwa sisityalo. Mfutshane ngokufudukela kwimozulu eyomileyo, okanye usebenzisa uninzi lweefungicides ezimbi, sihlala sifumana ixesha lokuvuna leeveki ezimbalwa. Sineeveki ezimbalwa zamatswele kulo nyaka; ekunene kwi-avareji, kwaye ndicinga ukuba yayiyinto entle yokutsala into ekwindla efanelekileyo ngokufanelekileyo.
Iminikelo kaNovemba inokufumana ukukhanya kancinci njengoko uninzi lwengqwalaselo yethu ijikela ekuweni nasekwenzeni izityalo zasebusika, ke sonke sinezinto ezintle zokutya esiqingatha sonyaka sonyaka ezifama.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, ngaba ungathanda ukujonga iwebhusayithi yethu esandula ukusekwa? Ifama ye-anyanisi ye-AGR ifuna ukuva kuwe! Cofa kule khonkco www.primeagr.com kwaye ukhuphe ilizwi lakho! Enkosi njengesiqhelo kwishishini lakho, kwaye ube neveki emnandi!